Ndị na -emepụta ihe na ndị na -eweta ngwaahịa China Vacuum Collection Tube Production Line IVEN
Ọbara mkpokọta tube gbakọta Line
Ahịrị mmepụta ọkpọkọ ọbara gụnyere ntinye tube, dosing kemịkalụ, ihicha, nkwụsị & mkpuchi, oghere, ịwụnye tray, wdg Ọrụ dị mfe & nchekwa yana njikwa PLC & HMI n'otu n'otu, naanị ndị ọrụ 2-3 nwere ike na-agba ahịrị ahụ niile nke ọma.
Ahịrị mmepụta ọkpọkọ ọbara gụnyere ntinye tube, dosing kemịkalụ, ihicha, nkwụsị & mkpuchi, oghere, ịwụnye tray, wdg Ọrụ dị mfe & nchekwa yana njikwa PLC & HMI n'otu n'otu, naanị ndị ọrụ 2-3 nwere ike na-agba ahịrị ahụ niile nke ọma. Tụnyere ndị nrụpụta ndị ọzọ, akụrụngwa anyị nwere atụmatụ pụrụ iche, gụnyere akụkụ n'ozuzu ya pere mpe, akpaaka na nkwụsi ike dị elu, ọnụego mmejọ dị ala na ọnụ ahịa mmezi, wdg.
Maka imepụta ọkpọkọ ihe mkpocha ọbara ma ọ bụ nke na-enweghị oghere.
Nkọwapụta tube & mbipụta n'ịntanetị
Nabata German Leuze GS photoelectric sensor, United States AB servo moto maka ijikwa izipu akara, moto JSCC na draịva ọsọ ọsọ dabara adaba maka ịkwọ ụgbọ ala na ịpị akara.
Ọ nwere ike ịdị na mbipụta n'ịntanetị sistemụ maka koodu ogbe na mbipụta ụbọchị.
Otu igwe nwere ike ịdị maka 8mm/13mm/16m.
Njikọ ịntanetị ya na ahịrị mmepụta.
Tube loading & nchọpụta
Teknụzụ na -eburu tube na -akpaghị aka, na -eburu tube ahụ n'ime mkpọchi na -akpaghị aka na onye na -achọpụta ihe na -enweghị tube ma ọ bụ tube ntụgharị ihu. Igwe ahụ na -etinye maka ụdị ọkpọ ọkpọ ọ bụla wee dozie ntụpọ nke akara ube ahụ mebiri nke igwe na -ebugharị ọkpọ ọdịnala
site na ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Kwadebe ya na sistemụ dosing 3, dị ka ihe ndị na -emepụta ihe si achọpụta mkpokọta ọbara.
USA FMI mgbapụta, ịgba dosing
Sirinji mgbapụta ebuli dosing
Sirinji mgbapụta ndochi dosing
Igwe ahụ nwere ọrụ nke ịhazi okpu akpaka, inye okpu, nchọpụta okpu na nchọpụta ebe, nchọpụta capping. N'ime tube ahụ ga -emepụta ụfọdụ nrụgide na -adịghị mma, wee buru tube n'ime akpa.
Ịgba akwụkwọ & ịdekọ ihe & ịkwa akwa
Enwere usoro ihicha 4, were kpo oku PTC, enweghị mmetọ n'ime tubes, yana achineve arụmọrụ dị elu nke ihicha. Ọ nwere ngwaọrụ idobe ziri ezi maka mkpara ọkụ na ọkpọkọ.
Uru nke Line Production tube IVEN
1.High ikike 15000-18000pcs/hour
2.High akpaaka, ezi ọrụ usoro na njikarịcha nke mwekota, 2-3 ọrụ rụọ nwere ike jikwaa dum mmepụta akara were were si tube loading ka okokụre ngwaahịa outputting
3.Suitable maka oghere mkpokọta ọbara na-enweghị oghere, na anyị nwere ike ahaziri maka iji ndị ahịa were otu ahịrị.
5.Box collection tube mmepụta akara dum akara nwere usoro àgwà akara. Nchọpụta nke ọtụtụ akụkụ, dị ka tubes tụgharịrị, akpa na-efu, dosing, okpomọkụ ihicha, okpu n'ọkwá, mbubata tray ụfụfụ wdg na-eme ka ọnụego ruru eru dị elu.
6.Three dosing usoro. Ezigbo dosing, 3 setịpụrụ usoro dosing nke nwere ike izute ihe nrụpụta/reagents dị iche iche chọrọ.
7.Akwadoro teknụzụ na -ebuli elu dị elu. Nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ na ọrụ nke ịbikọ ọnụ na imezi ihe na -akpaghị aka. Etinyere ya n'ụdị akụkụ akụkụ anọ na nke trayụfụ jikọtara ọnụ.
8.High Vacuuming ruru eru ọnụego. Na pụrụ iche imewe nke mmiri-ụdị tube racks. Enwere ike ịtọ ogo agụụ na ihuenyo mmetụ ahụ n'ụzọ dị mfe na n'ụzọ ziri ezi, enwere ike ịtọ ogo agụụ ohere kwekọrọ na mpaghara elu onye ọrụ.
9.High Quality Structure: Isi ahụ na -ewere igwe dị elu maka ibu ibu, elu na etiti na -ewere igwe anaghị agba nchara dị elu maka nhicha dị mfe. Zute ọkọlọtọ GMP
Ogo Tube dị mma Φ13*75/100mm; Φ16*100mm
Ọsọ na -arụ ọrụ 15000-18000pcs/elekere
Usoro nhazi na izi ezi Anticoagulant: 5 dosing nozzles FMI metering pump, nnabata njehie ± 5% dabere na 20μLCoagulant: 5 dosing nozzles kpọmkwem seramiiki injection mgbapụta, nnabata njehie ± 6% dabere na 20μLSodium Citrate: 5 dosing nozzles kpọnwụrụ akpọnwụ seramiiki, nnabata njehie ± 5% dabere na 100μL
Usoro nhicha PTC kpo oku nwere nnukwu onye ofufe.
Nkọwapụta okpu Ụdị ihu ala ma ọ bụ ụdị okpuru elu dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Akwụkwọ ụfụfụ dabara adaba Ụdị etinyere ma ọ bụ ụdị akụkụ anọ nke ụfụfụ.
Mwepụ ikuku Nrụgide ikuku dị ọcha 0.6-0.8Mpa
Ọrụ oghere 6300*1200 (+1200)*2000 mm (L*W*H)
Ezigbo onye ahịa
Nke gara aga: Ngwakọta Ngwakọta Mgbakọta
Osote: Vial Liquid na -ejuputa Line Production
Igwe Nnwale Ọbara Ọbara
Ụlọ ọrụ nchịkọta mkpokọta ọbara jikọtara ọnụ
Ụdị Mkpokọta Ọbara Ọbara Oem
Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe eji emejuola agịga, Disposable ntụtụ & agịga Production Line,